Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Jamaica » 3 Ụgbọ elu ọhụrụ na-aga Jamaica site na Belgium na Netherlands ruo Eprel
Foto sitere n'ikike nke elmnt sitere na Pixabay
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na-apụta na ntinye aka ugbu a na Spain, ekwuwapụtala na TUI Belgium na TUI Netherlands ga-ebido ụgbọ elu atọ kwa izu n'etiti Belgium, Netherlands na Montego Bay site na Eprel afọ a.
TUI Belgium ga-arụ ụgbọ elu abụọ kpọmkwem kwa izu n'etiti ọdụ ụgbọ elu Brussels International na Montego Bay, ebe TUI Netherlands ga-arụ otu ụgbọ elu kwa izu n'etiti ọdụ ụgbọ elu Amsterdam Schiphol International na Montego Bay. A na-eji ụgbọ elu Boeing 787 Dreamliner nwere ihe dị ka oche 300 nke ọ bụla maka ụgbọ elu ahụ.
"Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ọkwa a na mmetụta ọ ga-enwe na ngalaba njem anyị."
"Ụgbọ elu ndị a ga-eweghachikwa ahịa njem nlegharị anya Belgium na Netherlands ebe ha nọ tupu ọrịa a."
"Ọ bụ ezie na afọ abụọ gara aga bụ ihe na-akpụ akpụ, anyị arụsi ọrụ ike iji hụ na ọrụ ahụ ga-adị. Jamaica A na-akwadosi ike n'uche ndị mmekọ mba ụwa anyị dị oke mkpa kwa ụbọchị," Bartlett kwuru.
Belgium na Netherlands nwere mkpokọta ọnụ ọgụgụ ndị na-erughị nde 30, nnukwu ego otu onye ọ bụla na-akpata, yana mmasị siri ike na njem mba ụwa. Ha nọkwa na etiti European Union, nwere nnukwu ikuku, ụgbọ okporo ígwè na njikọ okporo ụzọ na-aga n'ọtụtụ mba Europe ndị ọzọ.
Delano Seiveright, Onye Ndụmọdụ Ọkachamara na Strategist na Ministri njem nlegharị anya mere ka ọ pụta ìhè na “ụgbọ elu Belgium na Dutch ga-ebute ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu asatọ kwa izu n'etiti kọntinent Europe na Jamaica. A na-arụ ụgbọ elu anọ n'etiti Frankfurt, Germany na Montego Bay, Jamaica site na ndị na-ebu German Condor na Eurowings Discover."
"Ọzọkwa, anyị ga-edobe ozi kwa izu n'etiti Zurich, Switzerland, na Montego Bay, Jamaica. Anyị na-ewepu ihe dị ka ụgbọ elu iri na ise na-anaghị akwụsị akwụsị kwa izu n'etiti United Kingdom na Jamaica nke Virgin Atlantic, British Airways na TUI na-arụ na ntule a, "Seiveright kwukwara.
"Nnukwu ntugharị na FITUR na-egosi n'ụzọ doro anya na njem nlegharị anya na-enwe ọganihu siri ike, na anyị aghaghị ịhụ na ndị Jamaica na-erite uru. Anyị agaghị echefu ngwa ngwa njem nlegharị anya, nke na-enyere aka itinye ego na njem nlegharị anya na akụ na ụba obodo. Njem nlegharị anya enweghị ike ịdị iche, n'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebubata ihe na-agbasa ọtụtụ akụkụ akụ na ụba, gụnyere ọrụ ugbo, nrụpụta na njem. Otu a ka esi enweta nkwado akụ na ụba," Bartlett kwuru.
Ọzọ na: Boeing | Edmund Bartlett kwuru | Amsterdam | Jamaica | United Kingdom | Europe | Eurowings | Brussels | Tourism | Germany | Belgium | Netherlands | Airport
Mba kachasị elu n'ụwa nwere ọnọdụ ọrụ kacha mma Belgium, Europe, Germany, Netherlands|
Ụgbọ elu Saint John-Toronto ọhụrụ na Swoop Airport|
Airport Amsterdam Belgium Boeing Brussels Edmund Bartlett kwuru Europe Eurowings Germany Jamaica Netherlands Tourism United Kingdom
Mmepe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na mba GCC